UPDATE: 24-kii saac ee la soo dhaafay oo Kiisas cusub oo Covid-19 ah oo la diiwaan-geliyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: 24-kii saac ee la soo dhaafay oo Kiisas cusub oo Covid-19...
UPDATE: 24-kii saac ee la soo dhaafay oo Kiisas cusub oo Covid-19 ah oo la diiwaan-geliyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay xanuunsidaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan-geliyay 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Warbixinta Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay in 25 xaaladood oo cusub dalka laga diiwaangeliyay, kuwaa oo 17 ka mida laga xaqiijiyay Somaliland, iyadoo Gobolka Banaadir laga diiwaangeliyay 7 xaalad, halka 1 xaalad laga helay Koonfur Galbeed.
Bukaanada cusub ee xanuunka laga helay ayaa 19 ka mida waxaa lagu sheegay inay rag yihiin, halka 6-da kalana ay haween yihiin.
Sida lagu sheegay warbixinta maalinlaha ee Wasaaradda Caafimaadka waxaa xanuunka ka bogsaday 8 qof, taasoo wadarta guud ee ka bogsatay ka dhigeysa 837 qof.
Xaaladaha guud COVID-19 ee dalka laga helay waxaa ay tiradoodu gaartay 2,860, illaa iyo hadana inta laga warqabo waxaa ugu geeriyootay 90 qof.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa maalin kasta soo saarta warbixin kooban, oo ay kaga hadleyso xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka ee dalka, marka laga reebo maalinta Jimcaha.
Diiwaangelinta xaaladado cusub